Tsy aleo ve tsy mivavaka akory?
2008-10-27 @ 20:48 in Finoana
Vao avy nandia faran'ny herinandro indray isika teo. Faran'ny herinandro hialan-tsasatra ho an'ny be sy ny maro. Fa misy ihany koa ireo mamonjy fiangonana amin'io fotoana io. Ny aty amin'ny ila-bolan-tany atsimo aloha mbola manana ny tanjany tsara io fivavahana io. Any amin'ny tany tandrefana no karazan'ny efa lefy mihitsy satria efa efa zary an-jaza izany amin'ny foto-pisainan-dry zareo.
Izaho manokana dia tsy mandà fa anisan'ny tena naharatsy laza ny fivavahana ny endrika famoronana natao handrendrika ny fisainan'ankizy tahaka ny dadabe Noely izay ho avy tsy ho ela indray. Efa mananontanona manko ny fetin'ny faran'ny taona. Rehefa mihalehibe ny zaza dia mahatsapa avy eo fa nofitahina tamin'ity resaka dadabe Noely ity. Mikisaka ho azy avy eo ny fisainana ka heverina koa avy eo fa mety ho noforoporonina ihany koa ilay Jesoa ifikiran'ny kristiana mafy. Mba efa nanaitra ihany aho tany alohaloha tany fa efa nahazo valinteny hoe dia ahoana indray no hamalifaliana ny ankizy? Dia ampiainana amin'ny lainga mandrakariva izy izany ho'aho koa.
Fa iray amin'izay tena mampihemotra ny fitoriana koa ny fihatsarambelatsihy ananan'ny maro amin'ny mpivavaka. Raha nahamarika isika dia io no teboka goavana iray tena famerimberin'ny olona tsy te-hiherika fivavahana intsony raha mijery ireo olona milaza azy ho mpivavaka manodidina azy izy. Ankoatra izay moa ny toetra hafa izay karazan'ny manambany sy miteny ratsy ary manompa mihitsy aza ireo efa lasa tsy mino an'Andriamanitra intsony. Rehefa dinihina dia entin'ny fo fotsiny. Matoa anefa ireny efa tsy mino ireny intsony manana ilay foto-pisainany tahaka izay dia efa lasa manana ny filozofiany noho ny fandinihana sy ny fandresendahatra tao anatiny tao indrindra rehefa mijery ireo heveriny fa mpino izy. Etsy andaniny anefa izany fandinihana lalina anaty izany (fandinihana ny tena sy ny hafa) toa tsy nandalo tamin'ny maro an'isa tamin'ny mpino fa ny mandray izay tany an-trano fivavahana izay very ny roatokony no heveriny fa fieritreretana nataony momba ny tenany.
Ankoatra izay indray moa ilay tantara laza ratsy nanalana baraka ny fiangonana an'arivony taona izao sy ity fisainan'ny fiangonana (tandrefana) ankehitriny efa mitsontsorika tanteraka ity. Miala tsiny aho miteny izany satria natao itoriana teny ihany koa ireo olona mivady amin'ny mitovy fananahana aminy sy ireo tsy manaiky ny nanaovan'Andriamanitra azy ho lahy na ho vavy fa izany tsy manome zo azy velively (amiko manokana) ho mpitari-pivavahana ihany koa nefa ny toetrany sy ny fironany mbola tsy miova akory. Tena mitsara indray aho eto ary azo kianina amin'ny fomba fihevitro. Ny mpitarika fivavahana manko dia fitaratra eo amin'ny manodidina azy. Matoa ny epistily nametraka fa tokony ho manambady tokana ny diakona sy ny mpitandrina ohatra dia misy jery ao tsy hitodihan'ny maso ho any amin'ny mpanankarena (lahy izay matetika mirona hanambady maro hatrany rehefa manambola izay) fa hiherika kosa any amin'ireo heverina ho mitandro tsara kosa ny hasin'ny ankohonana (ka manana ny fidelité). Izay fomba fijery izay dia ataoko fa mifangarika amin'ny fomba fijerin'ny be sy ny maro manerana izao tontolo izao amin'ny ankapobeny.
Fa hatramin'izao aho mbola tsy niditra mihitsy amin'ny anton-dahatsoratra akory. Hita tokoa aloha ankehitriny fa mbola misy ihany ilay endrika rebik'ondry manaraka ambokony izay izoran'ny be sy ny maro. Ny mampihomehy anefa dia ilay be sy ny maro ihany koa tsy manana tanjona mazava loatra. Ny tena ao an-tsaina dia araka ilay fomba fiteny malagasy hoe ny mitabe tsy lanin'ny mamba, ny akanga maro tsy vakin'amboa ary izay be no basy. Hany ka tsy hahagaga loatra raha misy ity tranga tantaraiko manaraka ity.
Misy tanora mitovitovy taona miaraka fiangonana, mifanakaiky dabilio na iray sampana dia lasa mpinamana ho azy eny. Lasa mpiresaka ary dia mora ho azy ny fifampitaritarihina. Tsy dia ho amin'ny tsara loatra ilay fifampitaritarihana fa miara-mibolisatra any ho any ka mampahatsiahy ilay hira "ô gorisa gorisa" somary lava iny fa manana tononkira miverimberina izay. Zavatra fahita isan'alahady izy ity na dia somary samy manana ny mampiavaka azy isam-paritra sy isam-piangonana ihany aza. Fiangonana eny ambonimbony eny eto Antananarivo no oharina eto ary tafiditra avokoa na ny fiangonana katolika na ny fiangonana protestanta. Misy fotoana leon'ny fizotran'ny fotoam-pivavahana ve ry zalahy (nefa maro an!) sa dia noho ny fahazaran-dratsy fa dia ireny miditra ao amin'ilay mpivaro-toaka avokoa. Feno ho'aho ny fivarotana ary misotro toaka avokoa ry zalahy nefa ny fitafy io ilay fitondra am-piangonana. Rehefa avy misotro ry zalahy dia mividy tsakitsaky sy na siligaoma avokoa mba hamono izay fofona mety ho tavela dia miditra am-piangonana indray. Mba jerijereo hoe ry zalahy ao ampiangonana ireny fa toa be mpitsako siligaoma rehefa avy noheverina ho "namonjy poritra" ireny.
Dia lasa amin'izay ny saiko hoe: tsy aleo ve tsy miangona tsotra izao toy izay mifamitaka tahaka izao? Iza no fitahina? tahotra ray aman-dreny angaha no nandehanana niangona tany? sa any am-piangonana no tena ahitana ny jôba ka izay ihany koa no tena mampazoto ho any fa tsy inona loatra? Sa mbola heverina fa izany mpiangona izany no ahazoam-boninahitra? Fatiantoka fotsiny ry zalahy ny mankany am-piangonana raha tahaka izany sady mandany fotoana fotsiny fa aleo ary mijanona any an-trano tsotra izao. Efa lalana mankany amin'ny tsi-finoana ihany aloha izany lalana izany rehefa mbola tsy nanaitra ilay feon'ny fieritreretana e! Any an-trano anie afaka mihaino izay tiana henoina, afaka mijery izay tian-kojerena ary afaka manao izay tiana atao e! Fa raha mijoro amin'ny maha-anao anao ianao no tsy menatra amin'izany ijoroanao izany mety hanana ny fiadanana anaty kokoa... dia ho tsapanao kokoa ny antony andehananao any ampiangonana na tsy tokony andehananao any intsony. Farafaharatsiny jerena ny namana izay tsy mitarika lava anao hivoaka ny fiangonana raha te-ho tamana ao ihany ianao.